FAQs - Jinan Zhancheng ukufunyanwa okuzenzekelayo Equipment Co., Ltd.
Q1: njani iwaranti?
I-A1: i-garanti yonyaka esemgangathweni, umatshini oneenxalenye eziphambili (ngaphandle kwezinto ezisetyenziswayo) uya kutshintshwa simahla (ezinye iindawo ziya kugcinwa) xa kukho ingxaki ngexesha lewaranti.
I-Q2: andazi ukuba yeyiphi efanelekileyo kum?
A2: Nceda undixelele eyakho
1) Ubungakanani bomsebenzi omkhulu: khetha eyona modeli ifanelekileyo.
2) Izixhobo kunye nokusika ubukhulu: khetha amandla afanelekileyo.
I-Q3: Amagama entlawulo?
A3: Alibaba isiqinisekiso yorhwebo / T / T / West Union / PayPal / L / C / Cash njalo njalo.
I-Q4: Ngaba unayo uxwebhu lwe-CE kunye namanye amaxwebhu okucoca amasiko?
A4: Ewe, sinayo yoqobo. Kuqala siza kukubonisa kwaye emva kokuthunyelwa siza kukunika i-CE / FDA / iSatifikethi semvelaphi / uluhlu lokuPakisha / i-invoyisi yorhwebo / ikhontrakthi yokuthengisa yokuvunyelwa kwamasiko
I-Q5: andazi ukuba ndisebenzise njani emva kokuba ndifumene Okanye ndinengxaki ngexesha lokusetyenziswa, indlela yokwenza?
1) Sineenkcukacha zomsebenzisi ezinemifanekiso kunye nevidiyo, unokufunda inyathelo ngenyathelo.
2) Ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngexesha lokusetyenziswa, kufuneka ugqirha wethu agwebe ingxaki kwenye indawo iya kusonjululwa sithi. Sinokubonelela ngombukeli weqela / uWhatsapp / i-imeyile / umnxeba / uSkype ngekhamera kude kube yeyakho yonke
3) Uhlala wamkelekile kumzi-mveliso wethu kwaye uqeqesho luya kuba simahla.
I-Q6: Ixesha lokuhambisa？
A6: Uqwalaselo ngokubanzi: iintsuku ezisi-7. Elungiselelweyo: iintsuku 7-10 zokusebenza.
I-Q7: Thelekisa nomnye umthengisi, yintoni inzuzo yenkampani yakho?
A7: Iminyaka elishumi yamava kwishishini le-laser. Iinjineli zobungcali zixhasa iimfuno zakho.
I-Q8: Thelekisa nomnye umthengisi, yeyiphi inzuzo kumatshini wakho?
Onke amacandelo esiwasebenzisayo ngawokuqala, uphawu oludumileyo lokukhetha: URaycus; I-JPT; Ubukhulu.
Kwaye sinako ukwanelisa zonke iimfuno zakho ulwenziwo.
I-Q9: Uyikhetha njani i-laser efanelekileyo?
Ifayibha laser isetyenziswa phantse kuzo zonke izinto zesinyithi, ezinje ngentsimbi engenasici, ialuminiyam, njalo njalo.
I-laser ye-CO2 ilunge ngakumbi kwizinto ezingezizo zesinyithi, njengeenkuni, isikhumba, njl.
I-laser ye-UV yenzelwe isinyithi kunye nesinyithi, ngakumbi iglasi, yikristale.
Siyayixhasa inkonzo yokwenza isampulu yasimahla, ukuba awuqinisekanga ngesiphumo sokumakisha, siya kuvavanya wena.
I-Q10: Ndingathanda ukuthengisa iimpahla zakho kwalapha ekhaya, ukuba ungasasaza njani?
I-A10: Sine-arhente esekwe kakuhle, siyavuya ukusebenzisana nawe, ukuba ufuna ukusasaza, nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane isisombululo esineenkcukacha.